Xukuno Dil iyo xarig isugu jira oo lagu riday askar katirsan ciidanka Dowladda | Allbanaadir.com
Home JUBALAND Xukuno Dil iyo xarig isugu jira oo lagu riday askar katirsan ciidanka...
Xukuno Dil iyo xarig isugu jira oo lagu riday askar katirsan ciidanka Dowladda
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida qaybta 27-aad ayaa maanya xukuno isugu jira dil iyo xabsi ku riday askar katirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo lagu helay in geesteen falal isugu jira dilal iyo dhac.
Afar askari oo ka kala tirsan ciidanka milatariga iyo NISA ayaa lagu helay dambiyada lagu soo eedeeyay ee kala ah dilal iyo dhac , waxaana maxkamada dhageysi kadib askartaasi ku riday xukuno kala duwan.
Maxkamada ayaa ku xukuntay Dable Nisa Bukhaari Axmed Maxamuud iyo Dable Xooga Salmaan ibraahin Shire dil toogasho ah halka Dubad Axmed Xuseen lagu xukumey Sadddex sano oo xarig ah iyo Sharmaake Muxumed Cali oo lagu xukumey hal sano oo xabsi ah.
Guddoomiyaha Maxkamada qeybta 27aad ee Ciidamada Gashaanle Maxamed Amiin Cabdulle ayaa sheegay in raga lagu riday xukunka qirteen dambigooda sidoo kale lagu cadeeyay waxa uuna xusay in ay heystaan muddo 30 Cisho ay racfaan uga qaadan karaan.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Liibiya kala hadashay Cafinta Lacago Deyn ah ay ku leedahay
Next articleMadaxweyne Laftagareen oo magacaabay Shan Wasiir oo cusub (Akhriso Magacyada)